Wararka - Warbixinta Suuqa Mesh Global Fiber Glass Mesh waxay soo bandhigeysaa isbeddellada ugu dambeeyay ee warshadaha, hal-abuurnimada, iyo xogta saadaasha suuqa
Warbixintani waxay bixinaysaa aragti faahfaahsan oo ku saabsan waxsoosaarka Fiber Glass Mesh oo ku saleysan cabirka suuqa, kobaca Fiber Glass Mesh, qorshooyinka horumarinta, iyo fursadaha Macluumaadka suuqa ee saadaalinta, falanqaynta SWOT, hanjabaadaha Fiber Glass Mesh, iyo daraasadaha suurtagalnimada ayaa ah dhinacyada muhiimka ah ee lagu falanqeeyay warbixintan.
Warbixinta ayaa sidoo kale baareysa oo qiimeynaysa saameynta cudurka faafa ee 'Covid-19' ku yeeshay warshadaha Fiber Glass Mesh, iyadoo la tixgelinayo fursadaha iyo caqabadaha iman kara, dhiirigelinta, iyo halista. Waxay qiimeyneysaa saameynta Covid-19 ee soo saareyaasha Fiber Glass Mesh waxayna bixisaa saadaasha kobaca suuqa oo ku saleysan xaalado kala duwan (rajo, rajo xumo, rajo aad u weyn, aad ayey u badan tahay, iwm.)
Dharka loo yaqaan 'Multiaxial fabric' waa mid aan jilicsanayn, dhidibbo faro badan iyo dhar xoojin badan leh.
Tirinta lakabka, jihaynta, miisaanka iyo waxa faybarku ka kooban yahay ee lakabyadu way kala duwan yihiin iyadoo lagu saleynayo khadka wax soo saarka iyo dalabka. Lakabyada waxaa lagu tolay dunta caagga.
Dharka waxaa lagu soo saari karaa iyada oo la adeegsanayo dhidib fara badan (0 °, 90 °, + 45 °, -45 °) ama lagu daro dermo la jarjaray iyo lakabyo badan oo xijaaban iyo / ama waxyaabo aan tolmo lahayn.
Codsiyada caadiga ah ee dharka noocyada badan leh ayaa ah tamarta dabaysha, badda ama dhismaha markabka, madaddaalada ama alaabta wakhtiga firaaqada ah, gawaarida, aerospace iyo difaaca.
Hal lakab ama dhowr lakab oo iswaafajinaya ayaa isbarbar socda.Qaybaha rovings waxaa lagu dhajin karaa jihada kala duwan leh cufnaanta kala duwan.Kadibna waxaa lagu tolaa dunta terylene. Dharka noocan oo kale ah ee qaabdhismeedka meshku yahay waa Multiaxial Fabric oo si kooban loogu yaqaan MWK. Waxay ku habboon tahay UP, Vinylester iyo Epoxy iwm.
Shayga waxaa si weyn loogu isticmaalaa tamarta dabaysha, warshadaha doomaha, gawaarida, duulista, meelaha iyo isboortiga. Wax soo saarka ugu dambeeya ee ugu dambeeya waxaa ka mid ah dabaylaha dabaysha, qolalka doonta ee loo yaqaan 'FRP', gawaarida gawaarida ka baxsan, duulista iyo alaabada hawada iwm.
Kuleylka darbiga dibedda
Wax soosaarka Cadka Fiber Glass Roofing Cadka waxaa badanaa loo isticmaalaa inuu yahay substrates aad u fiican oo loogu talagalay qalabka saqafka aan biyaha u caddayn. Waxaa lagu gartaa xoog siligga sare, iska caabbinta daxalka, iyo qoyaan fudud oo ay leedahay bitumen iyo wixii la mid ah. Awoodda muddada dheer iyo iska caabbinta ilmada waa la sii horumarin karaa iyada oo lagu daro xoojinta unugyada ku yaal ballacdiisa oo dhan. Nudaha saqafka aan biyaha ka caddeyn ee ka samaysan waxyaalahan hoose ma fududa in la dillaaco, gabowna oo qudhmo. Faa'iidooyinka kale ee leh unugyada saqafka ee biyaha aan caddayn karin ayaa ah xoog sare, isku mid ahaansho heer sare ah, tayada cimiladeedu wanaagsan tahay, iyo iska caabbinta soo daatay.
Gogosha dhalada ah ee loogu talagalay dusha sare ee FRP waxay leedahay kala firidhsan, dusha sare, jilicsanaanta gacanta, nuxurka waxsoosaarka oo hooseeya, impregnation cusbi oo dhakhso leh iyo adeecid caar ah oo wanaagsan taas oo ka dhigaysa midda ugu khuseysa hababka kale ee wax taaj oo kale ee FRP sida wax taaj oo kale saxaafadda, buufin, ilaa, bartamaha wax taaj oo kale rogrogmada.
1.C-galaas nudaha loo isticmaalo mashiinka ama gacanta ku sii dheji hawl gacmo dhejis ah oo ka samaysan alaabada fiberglass (FRP), saxanka, dhuumaha, jeexdin, daasadaha, yacht, waxyaabaha tubbada.
Maaddada muraayadda muraayadda ah ee loo yaqaan 'EE-glass fiber' ayaa la dareemay in loo isticmaalay epoxy khafiif ah kadib markii Qashinka loo yaqaan 'COINS' iyo alaabooyinka ningaxa korantada.
3.Alkali galaas khafiif ah oo khafiif ah ayaa dareemay in loo adeegsaday baytariga go'doonka, saqafka biyuhu, plasterboard waa guddiga, dabaqa balaastigga ah iyo tuubbada kiimikada leh ee daadinta, qalabka tayada daxalka.